U-Edson Glauber-UFatima ngoku uza kuzalisekiswa-ukubalwa ukuya eBukumkanini
U-Edson Glauber-UFatima ngoku uza kuzalisekiswa
INenekazi lethu leNenekazi leRosari kunye noXolo ukuze	Edson Glauber on Julayi 4, 2020:
Umama osikelelekileyo — umhle, ethandekayo kwaye ezele lubabalo-weza evela ezulwini ukuza kuthumela umyalezo kubo bonke abantu.
Nyana wam, amaxesha ezilingo ezinkulu afikile kwaye baninzi abangaboniyo, abazizithulu nabazizimumu kwimisebenzi yezulu, kuba uSathana uphumelele ukubakhokelela kude kwindlela yeNkosi, ebamfamekisa ngobuxoki bakhe obungapheliyo kunye neempazamo.
Oko ndikuthethileyo kuFatima kwaye ngoku kuwe kwimimangaliso emininzi yam iya kufezekiswa, kwaye uluntu luya kuhamba ngalo mzuzu omkhulu wentlungu kunye neentshutshiso ezimbi.
Musa ukoyika izilingo: ungaxhaleli, kodwa jonga kuNyana wam uYesu obethelelwe emnqamlezweni kwaye uya kufumana amandla kunye nobabalo lokunyamezelela yonke into ngalo uthando lobuthixo, ngaphandle kokuphika amazwi akhe kunye nenyaniso yakhe kanaphakade. Khumbula: nabani na okhanyela inyaniso akafanelanga ukuba kunye noThixo ezulwini, kodwa abe nguyise wobuxoki kumlilo wesihogo. Ungayamkeli inyaniso nokuba uyifumene kuNyana wam oyiNgcwele, kuba nabani na oyiphikayo inyaniso uyenza ixoki ngoThixo, kwaye akabuthandi ubuxoki.
Uninzi namhlanje lulwa nenyaniso, kuba baphila ngobuxoki neempazamo ezoyikekayo; Bangcoliswe yityhefu kaSathana kwaye zizixhobo zakhe kweli lizwe ukuze afezekise oko akufunayo: ukutshabalalisa imisebenzi yobungcwele yeNkosi. Thandaza, thandaza, thandaza, nyana wam, kwaye uThixo uya kulinika ihlabathi ubabalo lwakhe kunye noxolelo, ukuze iintliziyo ezininzi ezivaliweyo zivule kwaye ziguqukele kuthando lwakhe. Ndinqwenela ukuguqulwa kwentliziyo nganye, ndinqwenela ukukusindisa kwiintlekele ezinkulu ezinokuthi zikwehlele kwakamsinya. Sukuba sisithulu kubizo lwam njengoMama, kuba ndixhalabele kakhulu ikamva lemiphefumlo yakho nosindiso lwakho lwanaphakade. Guqula ubomi bakho ubuyele kwiNtliziyo yoNyana wam oyiNguquko, kwaye uya kukuxolela. Guqula ngoku!
Ndiyakusikelela ndikunike uxolo: egameni loYise, loNyana nelikaMoya oyiNgcwele.
← Pedro Regis - Kuya kubakho…
UGisella Cardia - Umnqamlezo… →